कुश्माको बहुप्रतिक्षित बन्जी र स्वीङ शनिबारबाट संचालनमा, कसरी पुग्ने ? (फोटो फिचर) – परिचय डटकम
कुश्माको बहुप्रतिक्षित बन्जी र स्वीङ शनिबारबाट संचालनमा, कसरी पुग्ने ? (फोटो फिचर)
By परिचय	 On १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:५४
कालीगण्डकीको खोंचमा पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा र बाग्लुङको बलेवा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुल बनाएर बन्जी, स्वीङ र स्काइ साइक्लीङ लगायत सहासिक खेल सन्चालनको तयारीमा रहेको द क्लिफ प्रालिले कार्तिक १५ गते शनिवारदेखि आफ्ना गतिविधि संचालनमा ल्याएको छ ।
२०७३ सालदेखी पुलको निर्माण सुरु गरिएकोमा यस अघि पुल संगै रिसोर्टको निर्माण २०७६ अन्तिममा सकिए पनि लकडाउनले गर्दा सन्चालनमा आउन नसकेको कम्पनीका अध्यक्ष राजु कार्कीले बताए ।
हाल विश्वकै अग्लो बन्जी मकाउमा ७६४ फिट उचाई र दोश्रो अग्लो स्वीट्जरल्याण्डको भरजस्का बाँध माथि ७२० फिट उचाईमा छ । द क्लिफ प्रालिको यो परियोजना पछि स्विटरल्याण्डलाई पछि पार्दै यसले बिश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जिका रुपमा आफुलाई दर्ज गर्ने छ भने कुश्मामा स्वीङ बिश्वकै अग्लो बनेको कार्कीले बताए । बन्जी र स्वीङ दुबैको मुल्य ७ हजार तोकिएको छ । पोखरा देखी कुश्माको दुइतर्फी गाडीको सुबिधा सहित बन्जी वा स्वीङको ८ हजार ४ सय ५० रहेको छ। टेण्डम (जोडि) स्वीङको १२ हजार छ ।
गुलेली शैलीको पिङ :
बन्जीकालागि निर्माण भएको पुलको उचाइ २ सय २८ मिटर छ भने सो भन्दा माथी बानाइएको पिङको उचाइ नदीबाट २ सय ४८ मिटर छ ।
चट्टान आरोहण लगायत साहसिक खेलमा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको डोरिको प्रयोग गरिएको र दक्ष प्राबिधिकबाट डिजाइन गरि निर्माण गरिएको पिङ नेपालकै नमुना पिङ बनेको कार्कीको दाबी छ । पिङ खेल्न प्रतीब्याक्ती २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने कार्कीले बताए।
स्टील कोर केबल प्रयोग गरि स्काइ साइक्लीङ तयार गरिएको हो । विश्वकै सबैभन्दा ऊचाईमा सन्चालित कालीगण्डकी खोंचको स्काइ साइक्लीङ २ सय २८ मिटर अग्लो छ भने लम्बाई तीन सय मिटर छ। दुइतर्फी तीन सय मिटर लम्बाई रहेको रुटमा एक पटकमा दुई जनाले साइक्लीङ गर्न मिल्ने कार्कीले बताए।
साइकल र यात्री दुबैलाई सुरक्षा डोरीले अड्काइएको हुन्छ। लिकमा रेल गुडेझैं फिक्स ह्याण्डल भएको साइकललाई रोपमा कुँदाइन्छ । स्काइ साइक्लीङको सन्चालन भने केही महिना पछि गरिने बताइएको छ ।
अध्यक्ष कार्की सँगै युवराज जोशी, नेत्र प्रसाद पराजुली, फ्लोरेन्स कार्की, राजन जोशी र नवराज शर्मा लगायतको लगानी रहेको परियोजनामा प्रभु बैंकको समेत ऋण सहयोग रहेको छ । बन्जी र स्वीङकालागि बनाइएको पुलको मात्र लगानी ८ करोड बढी रहेको बताइएको छ । १ सय २० रुपैयाँ तिरेर उक्त पुल वारपार गर्न सकिन्छ ।
द क्लिफ प्रालि पोखरा बाट ५५ किमि , अन्नपूर्ण बेसक्याम्प को गेटवे नयाँपुल बाट १५ किमि दुरिमा अवस्थित छ ।
काठमाडौ, चितवन, पोखराबाट पर्वत कुश्मा सम्म सजिलै सार्वजनिक बस पाइन्छ । पोखराको बाग्लुङ बसपार्कमा गएर कुश्मा सम्म पुग्ने ‘सेयरिङ ट्याक्सी’मा पनि जान सकिन्छ ।
द क्लिफमै गाडी सहितको प्याकेज बुक गरेर पोखरा—कुश्मा दुइतर्फी गाडीको सुबिधा लिन सकिन्छ । जम्प नगर्ने तर हेर्न मात्र जान चाहने ब्यक्तिले २ हजार रुपैयाँ तिरेर ‘गो एन्ड सी’ प्याकेज रोजेर दुइतर्फी गाडीको सुबिधा लिन सक्छन् ।